Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ala Ọma Jijiji na California Nevada: 5.9
Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ala ọmajiji siri ike kpuchiri ebe ugwu Japan
Edebere oke ala ọma jijiji 5.9 na nha na 3.52pm na Nevada, na nso California State Line na Smith Valley.
A tụrụ ala ọma jijiji 5.9 na Smith Valley, Nevada, na ahịrị California, Nevada State na 3:49 pm Pacific TIme na Tọzdee.
Ala ọma jijiji ahụ mere na Reno, Carson City na Stockton.
Enweghi mmebi ọ bụla ma ọ bụ mmerụ ahụ n'ihi ọnọdụ dịpụrụ adịpụ nke ala ọma jijiji ahụ.
Osimiri Smith bụ ebe a gụrụ ndị mmadụ ọnụ na Lyon County, Nevada, United States. Ndi bi na ya bu 1,603 na onuogugu nke 2010.
Obodo Mono bụ ógbè dị n’ebe ọwụwa anyanwụ-Central nke US steeti California. Efi afe 2010 reba no, nnipa 14,202 na wɔbae. na-eme ya steeti nke ise pere mpe na California. Oche nke ógbè ahụ bụ Bridgeport
July 8, 2021 ala ọma jijiji dị na mpaghara n'etiti mpaghara abụọ ahụ. Ogbu mmiri ahụ dị otu narị kilomita na iri isii.